Okwu Anime 42 banyere ihe ịga nke ọma nke ga-eme ka ị chee - Ndị Ọzọ
Anime Anime Quotes Banyere Successga nke Ọma Iji Nye Gị Extra Push
Isi iyi onyonyo egosipụtara: Adaba na akwụkwọ ahụaja.
Successga nke ọma pụtara ihe dị iche iche nye ndị dị iche iche.
Fitnọgide na-enwe ahụ ike.
Na-agụsị akwụkwọ na mahadum.
Inweta ihe mgbaru ọsọ ego ị setịpụrụ onwe gị.
Zụ ụmụ gbasiri ike.
Bịaru ọhụụ ohuru na ndụ gị.
Ga mba iri ise.
Ma ọ bụ ịhapụ àgwà ọjọọ ka mma.
Ihe ọ bụla ihe ịga nke ọma pụtara nye gị, okwu anime ndị a ga-enye gị ncheta dị mma nke 'gịnị kpatara' ị na-arụ ọrụ maka ebumnuche gị.
Anime Quotes Banyere Successga nke Ọma Iji Nye Gị Ihe Mgbakwunye:
Mikoto Misaka kwuru
'Otu onye na-etinye ihe mgbochi n'ihu m, enweghị m ike izu ike ruo mgbe m gafere ya.' - Mikoto Misaka
'N'ụwa a, ọ dịghị ihe dịka' ọdịda 'na mbụ. Onye mara “ụzọ iji merie” karịa onye ọ bụla bụkwa onye ahụgoro “mmejọ” kachasị. Yabụ… could nwere ike ịsị na “ọdịda” bụ “ihe ịga nke ọma”… you nweghị ike? - Toriko
Koro Sensei kwuru
“Nnwale bụ ohere iji kụzie n'ụzọ ziri ezi ihe mmeri na mmeri pụtara, nke ike na adịghị ike. Mụ akwụkwọ na-ekpokọta enyemaka nke ihe ịga nke ọma na ndọghachi azụ! Were ya ugbu a ihe ọ pụtara iji merie, ihe ọ pụtara na ịla! - Koro Sensei
“N'ikwu ya n'ozuzu, e nwere ihe abụọ mere mmadụ ji enwe mmasị ịkụzi ihe: Ma ọ bụ ọ chọrọ ịgafe ihe ịga nke ọma ya ma ọ bụ chọọ ịgafe ọdịda ya.” - Koro Sensei
Ruiko Saten kwuru
Ekpebiri m na ịhapụ ihe nile anaghị aba uru. Yep. Site ugbu a gaa n'ihu, m ga na-anwa ịgbalị! ' - Ruiko Saten
Osamu Dazai kwuru
“Ihe ịga nke ọma siri ike karịa ọdịda n’ọtụtụ ihe n’ụwa a.” - Osamu Dazai
Mikoto Kujou kwuru
“Achọghị m ịma ma ị bụ nwa onye isi ala ma ọ bụ ihe. Nke ahụ na-egosi mmeri nna gị. Ọ pụtaghị na ị magburu onwe ya. ” - Mikoto Jujou
Okwu nyocha nke onye nyocha
“Ọbụna nwatakịrị a natara obere otuto nwere ikike ime nke ọma n’otu onyinye, ndị na-enwetakwa agbamume mgbe nile pụrụ inwe obi ike, nwee ihe ịga nke ọma, na ịghọ ndị isi na-elekọta mmadụ. N'ihi na ha ekwenyeghi na ha abaghị uru, ha ekwesighi ibuli aka ma bọọ ọbọ maka akara aka ma ọ bụ ụwa niile. ' - Ezumike ezumike
top 10 kasị ukwuu Anime niile oge
Okwu Misaka Nakahara
'Ndị na-eleghara ime mgbalị anya ma ọ bụ ndị anaghị eme omume ọbụla bụ ndị na-arọ nrọ na otu ụbọchị ha ga-enwe ọganiihu na mberede.' - Misaki Nakahara
Ntughari Touma Kamijou
“Ihe ịga nke ọma na-abịara nanị ndị katara obi iguzo ọtọ n'atụghị ụjọ!” - Touma Kamijou
'Ohere na ihe ịga nke ọma na-abịara naanị ndị na-atụghị egwu ịwụ na igbe batter, ndị chọrọ ịkụ bọl karịa ihe ọ bụla, ma jiri ike ha niile na-efegharị!' - Touma Kamijou
Reiko Mikami kwuru
'Ọ bụ naanị ihe mwute ka ị hapụrụ ihe tupu ị nye ya égbè.' - Reiko Mikami
“Nothapụghị onwe gị bụ ihe dị mkpa n'ezie. N'ụzọ dị otú a, ị gaghị abụ onye nwere ọmịiko. ” - Reiko Mikami
Okwu Miho Azuki
Echere m na inwe nrọ, ịrụsi ọrụ ike na enweghị ike ịkwụsị enweghị ike iweta nhụsianya. ” - Miho Azuki
Julis Alexia Van Riessfeld kwuru
“Mụ onwe m ga-enweta ihe niile m chọrọ. Ọ bụghị n'ihi na mmadụ gwara m ka m mee ya, kama ọ bụ n'ihi na amaara m n'obi m na m nwere ihe m kwesịrị ịlụ ọgụ. ” - Julis Alexia Van Riessfeld
Okwu Kraft Lawrence kwuru
“Na ndụ, ọ ka mma iche na ihe ọjọọ ga-eme gị karịa ezigbo ihe. I nweghi ike ilele ihe ịga nke ọma onye ọzọ ma chee na ọ ga-eme gị. Enwere ọtụtụ mmadụ n’ụwa, ya mere ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na otu onye ma ọ bụ abụọ n’ime ha ga-enwe ihu ọma. Ma enwere naanị otu onye n'ime gị. Iche na ezigbo uba ga-abịakwute gị abụghị ihe dị iche karịa ịtụ aka na onye ọ bụla na-atụghị anya ya ma buru otu ihe maka ha. Ma ì chere na amụma ahụ ga-emezu? ” - Kraft Lawrence
Yukino Yukinoshita kwuru
“Ndị na-adịghị arụsi ọrụ ike enweghị ikike inwe anyaụfụ nke ndị nwere nkà. Ndị mmadụ na-ada n'ihi na ha aghọtaghị ọrụ siri ike dị mkpa iji nwee ihe ịga nke ọma. ' - Yukino Yukinoshita
Junichirou Kagami kwuru
“Can’t gaghị emeri otu egwuregwu n’emeghị ihe ọ bụla. Ma ọ bụrụ na onye ọzọ merie ya maka gị mgbe ahụ, ị ​​rụzubeghị ihe ọ bụla. Ndụ bụ otu ụzọ. ” - Junichirou Kagami
Nara Shikamaru kwuru
“Otu ụbọchị, achọrọ m ịlụ nwa agbọghọ nkịtị na-adịghị njọ ma na-adịchaghị mma. Nwee umu abuo, nke mbu nwa-nwanyi, emesia nwa nwoke. La ezumike nká mgbe nwa m nwanyị lụrụ di na nwa m nwoke wee ghọọ ninja na-aga nke ọma, ma jiri oge ndụ m niile gwuo shōgi ma ọ bụ Go. Mgbe ahụ nwụọ n'agadi tupu nwunye m. ” - Nara Shikamaru
Okwu Najimi Ajimu
“Chineke, ruo ole mgbe ka ha ga na-ese okwu banyere ihe ndị a na-enweghị isi? Ha niile bụ otu n’anya m. Ọ dịghị ihe ọzọ ma ụyọkọ ahịhịa. Ìhè na Ọchịchịrị. Ezi na Ihe Ọjọọ. Nsí na Mgbochi. Mmeri ma na-efunahụ. Ike na Adịghị Ike. Nwa na White. Ga nke Ọma na ọdịda. Obi ortọ ma ọ bụ Mwute… Ha niile bụ otu mgbe niile. Kedu ihe kpatara na mmadụ niile amabeghị nke a ugbua. - Najimi Aijimu
Katsuragi Keima kwuru
hụrụ n'anya na franxx gurren lagann
'Enwere ohere mgbe niile ịga nke ọma, ma ọ bụrụ na enweghị nke ọ bụla, naanị m ga-eme otu.' - Katsuragi Keima
Takakura Shouma kwuru
Akpọrọ m okwu ahụ bụ́ “akara aka” asị. Omumu, nzuko, nkewa, ihe ịga nke ọma na ọdịda, akụnụba na ọdachi na ndụ. Oburu na edoziri ndu ayi na akara aka site na akara aka, gini meziri amuru anyi? E nwere ndị nke ezi na ụlọ mụrụ, ndị amụrụ site na nne mara mma, na ndị amụrụ n’etiti agha na ịda ogbenye. Ọ bụrụ na nke ahụ niile kpatara akara aka, mgbe ahụ Chineke enweghị oke na obi ọjọọ. N'ihi na, kemgbe ụbọchị ahụ, ọ dịghị onye n'ime anyị nwere ọdịnihu na naanị otu ihe bụ na anyị agaghị aba oke n'ihe ọ bụla. ' - Takakura Shouma
Quy nwere ike ikwu
“You rụsiri ọrụ ike Lee, enweghị m obi abụọ na ịwa ahụ ga-aga nke ọma. I nwere ikike ịkpụzi ọdịnihu gị. Ma na otu puku, otu, na otu nde ohere ihe ga-eme na-ezighi ezi, m ga-anwụ soro gị. Kemgbe ụbọchị m zutere gị, nind my m bụ ịzụ gị ka ị bụrụ ọmarịcha ninja kachasị mma. Nke ahụ bụ nkwa! - Nwere ike Guy
Nkume Lee Lee
'Ọ bụrụ na ị kwenyere na nrọ gị, m ga-egosi gị, na ị nwere ike nweta nrọ gị naanị site n'ịrụsi ọrụ ike.' - Nkume Lee
Nchịkwa Kamogawa Quotes
“E nwere oge mgbe ịrụsi ọrụ ike agaghị ezu. Ma ndị mere nke ọma rụsiri ọrụ ike. ” - Onye nchịkwa Kamogawa
“Ọ gaghị ekwe omume ịrụsi ọrụ ike maka ihe na-adịghị gị mma.” - Silica
“Ndị mmadụ nwere ike ikwu na e nwere nguzozi, otu echiche na ihe ọ bụla na-eme n'ihi ihe kpatara ya… Mana eziokwu ezughi oke. N'agbanyeghị etu i siri rụọ ọrụ, mgbe ị nwụrụ, ị nwụrụ. Fọdụ na-etinye ndụ ha niile na-anwa ịzọ elu ha, ma ka na-anwụ na ịda ogbenye. Ọ bụ ezie na a na-amụrụ ndị ọzọ akụ na ụba na-enweghị ọrụ ọ bụla. Ọ bụ ụwa obi ọjọọ na aghara. Ma ọgbaghara dị mma niile. ” - Dante
Enwe D Luffy Quotes
“N'agbanyeghị otú o si sie ike ma ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume, echefula ihe mgbaru ọsọ gị.” - Enwe D Luffy
Nkwenye Masaru Ofuna
“Bịakọta ọnụ na ịrụsi ọrụ ike na onye ọ bụla bụ ihe na-atọ ụtọ n'ezie!” - Masaru Ofuna
Okwu Ntughari Lina
'Ọbụna Ọ bụrụ na ịnwee 1% ohere ịnweta mmeri, mana ị kwenyesiri ike na ị ga - efu, na 1% ga - abụ 0%.' - Lina Inverse
Akụ ọ bụla nke ị nwetara na-enweghị onye ọ bụla na-arụsi ọrụ ike na ya abụghị akụ ọ bụla. ” - Nyanta
Okwu Teppei Kiyoshi
“Keep na-agbasi mbọ ike iji merie, ihe na-agaziri gị nke nta nke nta. IEBERE onwe gị n’ihe masịrị gị, nke ahụ bụ ihe ọ pụtara ịnụ ụtọ ihe zuru oke. ” - Teppei Kiyoshi
Hachiman Hikigaya kwuru
“Workingrụsi ọrụ ike naanị anaghị eme ka obi sie gị ike na ị ga-emezu nrọ gị. N'ezie enwere ọtụtụ ikpe ebe ị na-emeghị. N'agbanyeghị nke ahụ, ịrụsi ọrụ ike na inweta ihe bụ ihe nkasi obi ma ọ dịkarịa ala. ” - Hachiman Hikigaya
Gon Freecs kwuru
“Iru eru abụghị ihe anyị ga-ekwu maka ya. Ndị na-adịghị mma na ihe ịga nke ọma ha nwere ike ịga n'ihu ọzụzụ ruo mgbe ha dị. ' - Gon Freecs
Tobio Kageyama kwuru
“Onye ikpeazụ n’ime ndị guzo ya bụ ndị meriri. Naanị ike. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ onye ikpeazụ guzoro dị ike. ” - Tobio Kageyama
Ntinye Daichi Sawamura
'Anyị agaghị emeri ma ọ bụrụ na anyị ekwenyeghị na anyị nwere ike.' - Daichi Sawamura
Erwin Smith kwuru
“Ọ bụrụ na anyị na-elekwasị anya naanị na-eme ihe kacha mma, anyị agaghị enwe ike nke onye iro anyị. Mgbe ọ dị mkpa, anyị ga-adị njikere itinye nnukwu ihe egwu, ma dịrị njikere itufu ihe niile. Ọ gwụla ma anyị gbanwere otu anyị si alụ ọgụ, anyị enweghị ike imeri. ” - Erwin Smith
Natsu Dragneel kwuru
mma kacha mma nke ndụ Anime 2015
“Ozugbo ị chetara ịda mbà, chee ihe mere ị ga-eji jigide ogologo oge ahụ.” - Natsu Dragneel
Ursula Callistis kwuru
'You gaghị enweta ihe ndị ị rọrọ na ha, ị ga-enweta ihe ndị ị na-arụ ọrụ.' - Ursula Callistis
Okwu Izuku Midoriya
“Mgbe ụfọdụ, ọ na-adị m ka m bụ onye dara ada. Dị ka enweghị olileanya m. Ma n'agbanyeghị nke ahụ, anaghị m ahapụ. Mgbe! ” - Izuku Midoriya
Echiche niile nwere ike
'Obere ọdịiche dị n'etiti ndị na-achọ mgbe niile maka isi na ndị na-achọghị, ọ ga-abụ ihe dị mkpa n'otu oge mgbe unu niile putara ọha mmadụ.' - Niile nwere ike
Atsuko Kagari kwuru
“Naanị gị lelee! Aga m aghọ amoosu dị ịtụnanya otu ụbọchị ma mee ka ụwa niile jua na mberede! ” - Atsuko Kagari
Kedu ihe ịga nke ọma nke anime na - amasị gị?
8 Quotes Site Aria The animation Ga-eme Ka Ndụ Gị Nwee Nzube
Ntuziaka 13 sitere na nwunye ochie Magus nke ga-akpali gị taa
21 Nke Anime Eziokwu Anime Banyere Ndụ Ga-emetụ Gị Obi
kacha mma oge niile